Maxaynu Ku Maamuusnaa Madaxweyne M I Cigaal? – Geeska Afrika Newspaper | Hargeisa, Somaliland
Maxaynu Ku Maamuusnaa Madaxweyne M I Cigaal?
3dii May 2002, 12 sanno ka hor, waxay warbaahinta adduunka iyo ta dalkeenuba si lama-filaan ah u weriyeen dhimashada Madaxweynihii labaad ee Somaliland, Alle ha u naxariisto’e, Maxamed X. Ibraahim Cigaal. Waxaynu xusuusan karnaa in ay ahayd maalin xanuun kulul oo murugo badan, maalin mustaqbalka dalku mugdi galay qof kastaana wadnaha farta ku qabtay. Walow ay geeridu mar walba xaq tahay, haddana Cigaal tiisu waxay inooga dhignayd tii uu Cali Jaamac Haabiil yidhi “abidkii rag waa gu’i jiree tanise waa gaw’e”.
Dareenadaas naxdinta leh ee ay dadku ku qaabileen geerida Cigaal waxay ka shidaal-qaadanayeen saamayn culus oo uu noloshooda ku lahaa, xusuuso isbiirsaday iyo muddo ku siman nus-qarni oo uu ahaa hoggaamiye siyaasadeed oo hadh iyo habeen ku hawlan guud ahaan danaha Soomaalida gaar ahaana kuwa Somaliland. Sidoo kale, waxay qiraal dadban u ahaayeen in uu taariikhdeena kaga jiro kaalinta uu Nelson Mandela Koonfur Afrika kaga jiro, Mahatma Gandhi Hindiya kaga jiro ama Abraham Lincoln Maraykan kaga jiro.
Cigaal wuxu udub-dhexaad u ahaa saddex marxaladood oo adag oo uu mid walba ka tagay mahadhooyin aan ka maydhmayn maskaxdeena. Wuxu hormood ka ahaa halgankii cuslaa ee dalkeena lagaga furdaamiyey gumaystihii Ingiriiska. Isaga ayaa gacantiisa ku soo saxeexay xornimadii Somaliland hanatay 1960kii wuxuna noqday hoggaamiyihii u horeeyey ee ay Somaliland yeelato iyadoo xor ah. Markii ay labadii Soomaaliyeed midoobeen, Cigaal wuxu maskax iyo muruqba isugu geeyey sidii ay Soomaalidu u noqon lahaayeen quwad ka dhex muuqata Afrika isla markaana hiigsata wadamada jiitay. Aragtidaas ayaanu ku foognaa ilaa ay milatarigu af-gambiyeen 1969kii isaga oo ra’iisal-wasaare ah kana dhigeen maxbuus.